သဘောင်္သားလည်း အသည်းနဲ့ ပါ (၂) ~ MSU Portal
8/20/2012 09:13:00 PM MYANMAR SEAMEN UNION3comments
မနှစ်က သဘောင်္ပေါ်မှာဆိုရင်…. တစ်နှစ်လုံးနေပြီး ကမ်းကို တစ်ခါမှ ဆင်းမသွားရှာတဲ့ သဘောင်္သားများကိုတောင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်…. ပိုက်ဆံကို ရသလောက်စုပြီး အိမ်ကို ပို့ ပါတယ်… အခန်းထဲပဲအောင်းပြီး စာဖတ်အခွေကြည့်နဲ့ တစ်နှစ်တာလုံး ကို ကုန်ဆုံးခဲ့ရှာတာပါ……
သဘောင်္တိုင်းမှာ သူ့ alcohol policy drug policy ရှိကြပါတယ်… ဟိုးအရင်ကလို အရက်မူးပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ခေတ်က ကုန်သွားပါပြီ…..
ဟုတ်ကဲ့ ခိုးသောက်မယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်…. ခိုးလည်းသောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်…. ဒါပေမယ့်… အဲဒီလို အရက်ကို သောက်ဖို့ အချိန်လိုပါတယ်… နေရာလိုပါတယ်… အဖော်လိုပါတယ်…. အဲဒီ အထဲမှာတော့ အချိန်က အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ…..
4 ~ 8 သမားတစ်ယောက်ဆိုပါစို့ … အဲဒီလို ပြောလိုက်တာနဲ့ အဲဒီ လူရဲ့ အလုပ်ချိန်ဟာ .. နံနက်လေးနာရီက နေ.. နံနက်ရှစ်နာရီ တစ်ကြိမ်…. ညနေလေးနာရီကနေ ညရှစ်နာရီတစ်ကြိမ်.. တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်.. ရှစ်နာရီအလုပ်ရှိပါတယ်… ဒီကြားထဲမှာ overtime နှစ်နာရီ အဖြစ် မနက်ရှစ်နာရီကနေ ..ဆယ်နာရီအထိလုပ်ပေးရပါတယ်… အလုပ်များတဲ့ အခါတွေဆို …. နေ့လယ် ၁၂နာရီ တစ်နာရီအထိ မနားကြရပါဘူး ….. အဲဒီလိုမနားကြရလို့ ညနေ လေးနာရီကိုလျှော့ပေးမလား ဆိုတော့လည်း .. မလျှော့ပေးပါဘူး … ညနေလေးနာရီမှာ အလုပ်ချိန်အတိုင်းပြန်ဝင်ကြရတာပါပဲ…. ဒါကြောင့် .. သဘောင်္သားတစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ချိန်ဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၀နုာရီ အနည်းဆုံးရှိပါတယ်… အဲဒါကလည်း ဆက်တိုက်မဟုတ်ပြန်တော့ … အိပ်ချိန်ကိုလည်း တစ်ဆက်တည်း ဆက်တိုက်အိပ်လို့ မရပြန်ပါဘူး ... အလုပ်ကို ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ကြရတာမို့ …. တစ်နေ့ကို ရှစ်နာရီလောက်တော့ အိပ်မှလုံလောက်ပါတယ်..
ဒါကြောင့် တစ်နေ့မှာ လေးနာရီဆီခွဲခွဲပြီး အိပ်ကြရပါတယ်…. မနက်အလုပ်တစ်ခါဝင် .. ပြန်ထွက်လာတာနဲ့ ရေမိုးချိုး ပြီး အိပ်ဖို့ ပြင်ရပါတယ်…. အဲဒီ အိပ်ချိန်မှာ လည်း အိပ်ပျော်အောင်အိပ်ရပါတယ်…. မအိပ်လို့ ရှိရင် .. နောက်တစ်ချိန်ကို အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ ပါဘူး ….အလုပ်ကို အစားဝင်ပေးမယ့်လူလည်း မရှိပါဘူး .. ခွင့်လည်း တင်လို့ မရပါဘူး …. ကိုယ့် ရာထူးမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းချည်းပါပဲ… နေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်….. ဒီတော့ အရက်သောက်ဖို့ မူးဖို့ ရုးဖို့ အချိန်ဆိုတာ …. အင်မတန် အချောင်ခို … အပြင်းထူတဲ့ သဘောင်္သားတွေမှာမှ ပဲရှိပါတယ်…. အဲ.. အဲဒီလို အချောင်ခို အပျင်းထူတဲ့လူကို လည်း သဘောင်္ပေါ်မထားပါဘူး … ကန်ချတာ ပါပဲ …. ဘာလို့ ဆို .. သူ့ အလုပ်ကို သူများ က ၀င်လုပ်နေရရင်….. အလုပ်နှစ်ခုကို လူတစ်ယောက်တည်းက လုပ်နေရတာမို့ သတ်မှတ်ထားသလောက် အလုပ်မတွင်ပါဘူး .. တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ခုကပ်လိုက်တာ နဲ့ သိပ်သိသာပါတယ်… ဒါကြောင့် သဘောင်္ပေါ်မှာအဲဒီလို
နောက်ဆုံး စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်……လူများများ နဲ့ မတွေ့ရတဲ့ ဒဏ်….. ကုန်းမြေကို လချီမနင်းရတဲ့ ဒဏ်… မိသားစုကနေ… ပိုက်ဆံတပူပူ တဆာဆာလုပ်….. ရှာသမျှ ဖြုန်း …. အမေတွေ အမတွေ.. က ဖဲရိုက်လို့ ကုန်.. မိန်းမ က ချဲထီထိုးလို့ ကုန်….. နှစ်နဲ့ ချီ ဖင်ကြားချွေးယိုအောင်လုပ်ြ့ပီး ကိုယ် ပို့လိုက်သမျှ .. ဘာမှ မဖတ်မတင်ပဲ ….
မှန်ပါတယ်လေ... ရေထဲနေတဲ့လူ ရေကြောင်ကြောင်ပေမပေါ့ ....
တစ်ချို့လည်း ပြောပါတယ်… ဒါဆိုလည်း လိုက်မနေပါနဲ့ တော့ လား … ပိုက်ဆံရတာကျထည့်မပြောဘူးလို့ ပြောလာတတတ်ပါတယ်…
မိတ်ဆွေ …. ပိုက်ဆံဆိုတာ လူသားတိုင်းသည်းခြေကြိုက်ပါ…… သဘောင်္သားများ လည်း ပိုက်ဆံကို ကြိုက်ပါတယ်….. ဒါပေမယ့် ….. ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ ပိုက်ဆံပိုရနေပါသလဲ … အပေါ်မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီ…. အသက်နဲ့ ရင်းထားတာကြောင့်ပါ….. အသက်အန္တရာယ်နဲ့ သိပ်နည်းစပ်တာ မို့ ပိုက်ဆံကို ပိုပေးထားတာ ပါ….
ကျွန်တော်တို့လည်း ဘယ်လုပ်ချင်ပါ့မလဲလေ…. ကိုယ့်ပညာအရည်အချင်းနဲ့ ဆိုရင်…. ပြည်တွင်းမှာသာ စိးပွားရေးကောင်းနေရင်.. သဘောင်္လိုက်နေစရာမရှိဘူးပေါ့ ….. ခေတ်ကာလကြောင့်ပါ……
နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးမကောင်းလို့ ပါ...
ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ ကိုယ်... ထိုက်သင့်တဲ့လစာတော့လိုချင်ကြတာ ပါပဲ ..... ဘယ်သူက သားကွဲ မယားကွဲ.... မိဘကွဲ .. မိသားစုနဲ့ ခွဲပြီး .... ရေလယ်ကောင်မှာသွားနေချင်ပါ့မလဲဗျာ .... မှန်ပါတယ်.. ငွေကြောင့်ပါပဲ
တစ်ခါလောက်ရိုက်ကြည့်စမ်းပါ…. နှာဘူးဒါရိုက်တာ .. ငမ်းကြောဆွဲဒါရိုက်တာ
အဲဒါမှ မဟုတ်. .. နှာဘူး စစ်သား ငမ်းကြောဆွဲစစ်သား .. ဒါမျိုးလေးလည်း ရိုက်ပါဥိး …. မရိုက်ရဲဘူးမဟုတ်လား …... ဒီလိုမျိုးပေါ့ ….
ကျေးဇူး ပြုပြီးလည်း ယုံစေချင်ပါတယ် ..………သဘောင်္သားလည်း အသည်းနဲ့ ပါ.ပဲ.... ကျွန်တော်တို့ တကယ်ခံစားတတ်ပါတယ်…….ဗျာ
March 21, 2013 at 6:53 PM Reply
March 21, 2013 at 6:57 PM Reply